Iilogo eziNxantathu: Ezona Logos zikaNxantathu zigqwesileyo kunye neempawu zazo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 21/04/2022 13:06 | Ukuhlaziywa ukuba 22/04/2022 13:12 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Uyilo lweempawu luba luninzi lwejometri yonke imihla, kwaye akumangalisi ukuba abaqulunqi abaninzi baqeshe ukusetyenziswa kweemilo zejometri eziqhelekileyo kunye nezilula kwiifom zabo, kuba zizinto ezifanelekileyo zokumela ngendlela engabonakaliyo kwaye ngokomfanekiso oko kujoliswe kuyo. kwaziswa.
Yiyo loo nto kwesi sithuba, siza kukwazisa kwihlabathi leelogo kwakhona, kodwa nakwimilo yejometri. Bangaphi abaqulunqi abamele iilogo zabo ngeemilo ezifana nonxantathu. Into ephawulwe kakhulu.
Ukuba ungathanda ukwazi ngakumbi ngolu hlobo loyilo, unganqikazi ukuhlala kule post, kuba siza kukuxelela iinkcukacha ezinomdla kakhulu.
1 Iilogo ezinxantathu: Zintoni?
1.1.1 Isikhundla sakho
1.1.2 Indlela yayo
2 Ezona logo zikanxantathu
2.1 Uqhuba kuGoogle
Iilogo ezinxantathu: Zintoni?
Iilogo ze-triangular zezo logos ezibonakaliswe ngokukodwa kwimilo yejometri ethile, kule meko inxantathu.
Oonxantathu ziziqalelo eziphawulwa ikakhulu ngemiba evuselelayo efana nokukhula, ukugxila, inkxaso, impembelelo, amandla, ukulingana, ubulungisa, isayensi kunye namandla. Ngaphandle kwamathandabuzo, yimiba ebaluleke kakhulu ekufuneka ithathelwe ingqalelo phakathi kwamaxabiso asisiseko woyilo. Ngamanani amele kakhulu adla ngokufunyanwa kuyilo lwesazisi oluninzi.
Ngokuxhomekeke kwindlela iipolygons ezibekwe ngayo okanye ezifunyenwe ngayo, zinokubonisa imiba engalunganga okanye elungileyo. Oko kukuthi, akufani ukubona unxantathu emelwe ngesikhundla esiwileyo, kunomnye ophakanyisiweyo kwaye unesigxina esithe tye. Okwesibini kuya kuthetha amandla amaninzi kunelokuqala. Yingakho unxantathu, ukuba sithetha nge-psychology yeefom, yinto eguqukayo kakhulu, leyo ngamanye amaxesha unokubheka phambili okanye athathe amanyathelo amabini umva ngaphandle kokuthandabuza. Iyamangalisa indlela iimilo ezinokuba nazo zombini iintsingiselo.
Unxantathu uchazwa njengopoligoni owenziwe ngamacandelwana amathathu anemigca apho adityaniswa enye kwenye ngeendidi ezintathu. Amacala amaninzi alo mzobo amisela into esiyaziyo njenge-angle yangaphakathi kwaye igcina i-convex epheleleyo. Ngokuqhelekileyo zinemilo eyahlukileyo, ezinye zide okanye ezinye zithe tyaba, kodwa zihlala zigcina i-essence efanayo. Ngaphandle koko, bakwanayo nolungelelwaniso oluthile lokubonwayo, Ngenxa yesi sizathu, yenye yamanani ukuba, kwi-psychology yeefom okanye kwithiyori yomfanekiso, isoloko ithambekele ekunikezeni i-dynamism ethile kwaye ivelele phakathi kwezinye izinto.
Uya kumangaliswa linani leelogo okanye iimpawu ezisebenzisa lo mfanekiso njengoyilo oluphambili. Yiyo loo nto, ngezantsi, siyile uluhlu olude lweempawu zebhrendi oya kuzazi kwangoko.
Qaphela kuba inika umdla ukuba uyazi ukuba basebenzise le milo inomdla kakhulu kwaye ingaqhelekanga kuyilo lwabo, kwaye okona kulungileyo kuko konke, indlela unxantathu oye wakwazi ngayo ukuba yinxalenye yeyunithi ephambili yophawu okanye inkampani. Ukushiya ngale ndlela indawo enkulu kwimarike kwaye ngaphezu kwayo yonke ixabiso elikhulu kunye nokwahlukana okukhulu phakathi kwezinye iimpawu ezikhuphisana nazo.
Ezona logo zikanxantathu
Umthombo: Iimpawu zeBrand
Inkampani edumileyo kunye nesikhangeli esikhulu se-intanethi, uGoogle. Yenze uyilo olutsha phakathi kwe-2016, igxininisa le nxalenye yecandelo le-Google Drive, oko kukuthi, ukugcinwa kwayo kwangaphakathi. Ukwenza oku, wasebenzisa oko sikufanisa njengonxantathu.
icala ngalinyee lo nxantathu wahlukile kuba unombala owahlukileyo, kodwa umbala ngamnye awukuko ukuba ukhethwe ngokungakhethiyo kodwa ugcina intsingiselo., ekubeni imele umsebenzi wayo ngamnye: Amaxwebhu, i-spreadsheets kunye neentetho ezidumileyo esiye sayila ngexesha elithile. Ngaphandle kwamathandabuzo, uphawu olubonelela ngokhuseleko olunikezelwa yinkampani kubasebenzisi bayo.
Ukuba siqhubeka noGoogle, sikwaqonda ukuba kuyilo lwabo bayaqhubeka nokugcina umgca wegraphic efanayo. Ukunika ugxininiso ngakumbi, basebenzise lo mzobo njengesithethantonye seqhosha lokudlala elidumileyo okanye elingaqhelekanga, kungoko lithiywa kwalo. Ukongeza, akazange aqhubeke nomgca ofanayo wegraphic kodwa wagxininisa umbala wayo ngamnye. Ngale ndlela, wongeza imibala eyahlukileyo kwiifom zakhe, kodwa uhlala ugcina i-aesthetics kunye nexabiso lombala elimele inkampani kakhulu.
Awunakuze ucinge ukuba uphawu oludumileyo lwempahla yezemidlalo luya kungena kuluhlu lweelogo ezinxantathu okanye amanqaku. Kodwa inyaniso kukuba ewe, inkampani yase-Italiya yasekwa ngo-1911, ishiye amaxabiso amaninzi kunye nempumelelo yokuthengisa.
Ilogo yayo ikakhulu yenziwe ngohlobo olungqukuva olunika amandla kunye nomlinganiswa wezemidlalo inkampani efuna ukubonakalisa kwiimveliso zayo. Kwakhona, akuphelelanga apho, njengoko bejika unobumba A ube ngu-a unxantathu ngenjongo yokumela intaba, uhlobo lomfanekiso wesibini obonisa ukuqina, amandla okanye ukulinganisela okubonakalayo.
Yenye yezo logos ozibonayo kwaye ngoko nangoko aziphuncuki engqondweni yakho. Ayigcini nje ngokufihla intsingiselo ngenxa yoyilo lwayo, kodwa ngenxa yento emele inkampani. Umyili wayefuna ukubonakalisa imvakalelo yokuthuthuzela kwi-typography kunye negraphic element, ngale ndlela, inkampani yokuhamba yayifuna ukuba abaphulaphuli bayo bazive ngendlela efanayo rhoqo xa besebenzisa isicelo.
I-logo yenziwe ngobume obufana nentliziyo, enika uthando kunye nothando, embindini kukho uhlobo lwesangqa apho simele intloko yomntu ophakamise iingalo kwaye ke unxantathu obonisa isiqalo sophawu. Ngaphandle kwamathandabuzo indibaniselwano yeemilo zejometri.
Inkampani kamabonwakude eyaziwayo, edume ngokwenza iividiyo kwiYouTube malunga nekhaya kunye nokulungiswa kwakhona, ikwayinxalenye yeempawu eziphezulu ezinxantathu. Bandakanya ilogo engentla okanye ngaphezulu kwelogo, apho ifanekisela uphahla lwendlu. Ngokujongana nombala ofana noluhlaza okwesibhakabhaka, baye banikezela nge-brand yonke imisebenzi emele ngayo kumaxabiso ayo.
Uqikelelo lolunye lweempawu zempahla ezithe zaguqula ishishini kwiminyaka yakutshanje. Kuthathwa njengophawu oluphezulu lwexabiso lemveliso yalo kunye nomgangatho onikezelayo. Kodwa eyona nto ibethayo luphawu lwayo, olwenziwe ngunxantathu ojonge ezantsi, ebonisa imvakalelo yonxunguphalo okanye unxunguphalo apho imele inkululeko inkampani efuna ukuyinika uluntu. Ngaphandle kwamathandabuzo ngumbono olungileyo kuba iGuess ibisoloko ifuna ukujongana noluntu olunempembelelo enkulu, apho kulo mzekelo ngabantu abatsha, abaphulaphuli abakwaziyo ukubonisa utshintsho olutsha kwishishini lefashoni yasezidolophini.
I-Reebok yenye yeempawu eziyinxalenye yecandelo lezemidlalo. Uphawu oludumileyo lusebenze neembaleki eziziingcali kunye nabantu bezemidlalo kwimbali yayo yonke. Kuze kube yiminyaka embalwa edlulileyo, bagqiba ekubeni batshintshe idizayini ye-brand ngokunika uhlobo lwenxantathu kwi-logo yayo. Ngale ndlela baye baguqula injongo yophawu, bezama ukufikelela kubaphulaphuli abaninzi., ukushiya ecaleni kwezemidlalo kunye nobungcali. Umbono oqaqambileyo owawudinga kuphela ukumela unxantathu obomvu.
Iqela elidumileyo kunye nomnye wabameli abakhulu bensimbi enzima nabo bajoyina uluhlu. I-logo yenziwa luhlobo lwe-watermark apho bobabini oonobumba bokuqala kunye nabokugqibela banda kunye nelogo benza uhlobo lukanxantathu opheleleyo kwi-brand. Ngale ndlela, imele amandla ewonke, amandla kunye namandla iqela elifuna ukuwahambisa ukususela ekuqaleni. Ukongeza, uphawu lwalo lombala omnyama lunika ngakumbi amandla afunekayo, singasathethi ke nge-typography ephumelele kakhulu kunye nomfuziselo abawusebenzisele ukuyila kwabo.
Olona phawu lwetshokholethi ludumileyo eSwitzerland lukwananxantathu omncinci kwilogo yalo. Unxantathu sithetha ngawo uqulathe eyona ntaba ibalulekileyo eSwitzerland ebizwa ngokuba yiMatterhorn. Ukongeza, umfanekiso ofihliweyo uboniswa phakathi komhlophe kunye negolide yegraphic element, ngeli xesha umfanekiso webhere engaqhelekanga. Ukumela isambatho sengalo apho uphawu luvela khona. Yenye yezona logo zibukekayo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, zombini uphawu lwayo kunye noyilo lwayo lufikelele kwinani elikhulu labantu abavela kuzo zonke iimbombo zehlabathi.
Kukho iibrendi ezininzi ezifake umzobo wejometri kuyilo lwesazisi sabo. Njengoko siye sakwazi ukuqinisekisa, unxantathu uvelisa uhlobo lwamandla kunye namandla okwenza uphawu luthathe intsingiselo ngakumbi kunokuba sele lunayo.
Yiyo loo nto, ngalo lonke ixesha uyila ibhrendi, gcina engqondweni ukusetyenziswa kwalo mfanekiso umangalisayo kuyilo lwakho, njengoko kuya kwenza uphawu lwakho lube nomdla ngakumbi. Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga noyilo lwebrendi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iilogo ezinxantathu
Imibala engathathi hlangothi: ukusetyenziswa kunye nokudibanisa